ပြေတီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ စိုးကျော်ဆန်း – Cele Posts
ပြေတီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒါရိုက်တာ စိုးကျော်ဆန်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးနဲ့ သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ ကတော့ အကယ်ဒမီဆုရှင် တွေဖြစ်ပေမဲ့ အရေးကြီးလာရင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက် ကနေ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ဇနီးမောင်နှံကို ပုဒ်မ(၅၀၅)ကနဲ့ ဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ အကျဉ်းသား (၂၀၀၀)ကျော် လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ အူဝဲတို့ဇနီးမောင်နှံမပါလာတဲ့ အပေါ် သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးကလည်း ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ဒါရိုက်တာစိုးကျော်ဆန်းက ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အကြောင်းကို သတိတရပြောပြလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဦးတီနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါရိုက်တာစိုးကျော်ဆန်းက ဦးတီရဲ့ စိတ်သဘောထားကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဦးတီက သူတစ်ပါးအပေါ်မှာ စာနာနားလည်မှု ပေးနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့ရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထား ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ကြောင်း၊ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ပံ့ပိုးပေးနေသူဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ဒါ့အပြင် ကိုစိုးကျော်ဆန်းက အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုလည်း သူ့ရဲ့ညီမလေး တစ်ယောက်လို ခင်မင်ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အနုပညာလောကထဲမှာ အတူလှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြရင်းနဲ့ တစ်မအေတည်းမွေးတဲ့ မောင်နှမအရင်းတွေလို လက်သည်းဆိတ်ရင် လက်ထိပ်နာတတ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် အူဝဲတို့ဇနီးမောင်နှံကို အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေချင်ကြောင်း ပြောထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
“အချိန်တွေကြာ လာတော့ ဘယ်တော့ပြန်လွတ်မြောက် လာမလဲ မျှော်ရင်းမျှော်ရင်း ရင်ဘတ်တွေ နာလာတယ် သူ့မေမေဖြစ်တဲ့ အန်တီမာရဲ့ရင်ထဲ…သမီးလေးရဲ့ရင်ထဲ ကမေးခွန်းတွေ…သားကလေးရဲ့ နုနယ်လွန်းတဲ့အတွေးတွေကို ကျွန်တော်ဆက် မစဉ်းစားရဲဘူး…” ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဒါရိုက်တာစိုးကျော်ဆန်း ကတော့ အူဝဲတို့လွတ်ဖို့ အတွက်သာ ဆုတောင်းပေးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြေတီဦးနဲ့အူဝဲတို့ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ဆုတောင်းပေးကြအုံးနော်.
Source: SoeKyaw Sann
ပွတေီဦးနဲ့အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ရဲ့ ပရိသတျတှေ မသိသေးတဲ့ အကွောငျးတှကေို ပွောပွလာတဲ့ ဒါရိုကျတာ စိုးကြျောဆနျး
ပရိတျသတျကွီးရေ…သရုပျဆောငျပွတေီဦးနဲ့ သရုပျဆောငျ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ ဇနီးမောငျနှံ ကတော့ အကယျဒမီဆုရှငျ တှဖွေဈပမေဲ့ အရေးကွီးလာရငျ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အမှနျတရားဘကျ ကနေ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ ရပျတညျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့လညျး သူတို့ဇနီးမောငျနှံကို ပုဒျမ(၅၀၅)ကနဲ့ ဝရမျးထုတျပွီး ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကပဲ အကဉျြးသား (၂၀၀၀)ကြျော လှတျပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ အူဝဲတို့ဇနီးမောငျနှံမပါလာတဲ့ အပျေါ သူတို့ရဲ့ပရိသတျတှနေဲ့ ပွညျသူတှေ အားလုံးက စိတျမကောငျးဖွဈနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။အနုပညာ အသိုငျးအဝိုငျး တဈခုလုံးကလညျး ဖမျးဆီးခံ ထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျနိုငျဖို့အတှကျ ဆုတောငျးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး ဒါရိုကျတာစိုးကြျောဆနျးက ပွတေီဦးနဲ့ အိန်ဒွာကြျောဇငျတို့ဇနီးမောငျနှံရဲ့ အကွောငျးကို သတိတရပွောပွလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ ဦးတီနဲ့ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့တဲ့ သူငယျခငျြး တဈယောကျအနနေဲ့ ဒါရိုကျတာစိုးကြျောဆနျးက ဦးတီရဲ့ စိတျသဘောထားကို ဖှငျ့ဟလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။
ဦးတီက သူတဈပါးအပျေါမှာ စာနာနားလညျမှု ပေးနိုငျသူဖွဈကွောငျး၊ သူ့ရဲ့မိသားစုအပျေါမှာ တနျဖိုးထား ခဈြမွတျနိုးသူဖွဈကွောငျး၊ အနာဂတျရဲ့ မြိုးဆကျသဈတှကေို ပံ့ပိုးပေးနသေူဖွဈကွောငျး စသညျဖွငျ့ ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ဒါ့အပွငျ ကိုစိုးကြျောဆနျးက အိန်ဒွာကြျောဇငျ ကိုလညျး သူ့ရဲ့ညီမလေး တဈယောကျလို ခငျမငျရတဲ့အကွောငျး ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ အနုပညာလောကထဲမှာ အတူလှုပျရှားရုနျးကနျကွရငျးနဲ့ တဈမအတေညျးမှေးတဲ့ မောငျနှမအရငျးတှလေို လကျသညျးဆိတျရငျ လကျထိပျနာတတျနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ အူဝဲတို့ဇနီးမောငျနှံကို အမွနျဆုံးလှတျမွောကျစခေငျြကွောငျး ပွောထားတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
“အခြိနျတှကွော လာတော့ ဘယျတော့ပွနျလှတျမွောကျ လာမလဲ မြှျောရငျးမြှျောရငျး ရငျဘတျတှေ နာလာတယျ သူ့မမေဖွေဈတဲ့ အနျတီမာရဲ့ရငျထဲ…သမီးလေးရဲ့ရငျထဲ ကမေးခှနျးတှေ…သားကလေးရဲ့ နုနယျလှနျးတဲ့အတှေးတှကေို ကြှနျတျောဆကျ မစဉျးစားရဲဘူး…” ဆိုပွီးရငျဖှငျ့လာတဲ့ ဒါရိုကျတာစိုးကြျောဆနျး ကတော့ အူဝဲတို့လှတျဖို့ အတှကျသာ ဆုတောငျးပေးနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ပွတေီဦးနဲ့အူဝဲတို့ကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ဆုတောငျးပေးကွအုံးနျော.
ကားပေါ်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကာ ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ အိမ့်ချစ်ရဲ့ခင်ပွန်း
ရေမွန်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူရဲ့ပုံတူပါရှိတဲ့ လည်သာအိတ်လေးကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တစ်ဦး